Manitoba (/ ˌmænɪtoʊbə / (Ku dhawaad ​​codka dhegeysanaya)) waa gobol ku yaal bartamaha durugsan ee Kanada. Waxaa inta badan loo tixraacaa mid ka mid ah saddexda gobolladood oo kala ah (Alberta iyo Saskatchewan) iyo gobolka shanaad ee ugu badan ee gobolka Canada iyada oo lagu qiyaasay 1.3 milyan oo qof.
Manitoba wuxuu daboolayaa 649,950 oo kiilomitir oo laba jibbaaran (250,900 sq m) oo leh dhul balaadhan oo kala duwan, oo ka soo jeeda xeebaha waqooyiga badhtamaha badda illaa xuduudda koonfureed la leh Maraykanka. Gobolka waxaa xuduudaha gobolada Ontaariyo iyo Saskatchewan ku yaalla galbeedka, dhulalka Nunavut ee waqooyiga, iyo Waqooyi Galbeed ee waqooyi-galbeed, iyo wadamada Waqooyiga Dakota Minnesota ee koonfurta.
Dadka reer Aborijiniska ah waxay ku noolyihiin waxa haatan Manitoba ee kumanaan sanadood ah. Dabayaaqadii 17-aad, ganacsatada dhogorta ah waxay yimaadeen aagga markii ay qayb ka ahayd Rupert's Land oo ay leedahay shirkadda Hudson's Bay. 1869-kii, wada-xaajoodka gobolka Manitoba wuxuu u horseeday kacdoon hubaysan oo ka dhan ah dadka reer Métis ee ka soo horjeeda dawladda Kanada, oo ah isku dhac loo yaqaan "Red River Rebellion". Go'aanka dib-u-soo-nooleynta wuxuu u horseeday Baarlamaanka Kanada oo ka gudbay Sharciga Manitoba 1870-kii kaas oo abuuray gobolka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Manitoba&oldid=231036"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Febraayo 2022, marka ee eheed 03:53.